Iingcamango zangasese ezisezantsi - i-8 yeyonaGumbi lokuhlambela elincinci elincinci kunye neeNgcaciso zeCloakroom - Igumbi Lokuhlambela
Ngokwesiqhelo lelona gumbi lincinci endlwini, kodwa eso ayisosizathu sokusilela ukwenza ingxelo ngengubo yakho yokunxiba.
Yithayiphe ngokuzithemba, ubonise ubuncwane, fumana indawo yokugcina, yongeza ukukhanya kunye nobushushu obufudumeleyo, kwaye unokugqibela ngokuchitha ixesha elininzi apho kunokuba wawucinga njalo.
1. UTSHABALALELELE ULOO?
Izibonelelo zomgangatho osezantsi we-W. zininzi; iluncedo kubantwana, ukufikelela ngokulula kwizalamane ezindala, kufikeleleke kakuhle egadini, kunye nokunxiba kancinci kunye nokuqhekeza kumagumbi okuhlambela aphezulu nakwizindlu zangasese. Kodwa ukubeka phi? Ukugcina iindleko kunye nokuphazamiseka, yenza indawo enye ukuba ifikeleleke ngokulula kunikezelo lwamanzi kunye nemibhobho yomhlaba. Indawo elungileyo iphantsi kwezitepsi. Okanye unokwenza icandelo lokuphela kwepaseji ende. Iingcali zicebisa ukuba kwindlu yangasese kunye nesitya, kufuneka indawo yokulinganisa ubuncinci i-80cm x 140cm. Ukuba unenkolelo, ungaze ubeke i-lavatory ecaleni komnyango wangaphambili. Iingcali zeFeng shui kholelwa ukuba lilishwa; ithamsanqa lakho lisengozini yokukhutshwa.
Iindonga zepaneli zeplanga ze-diy
UTammy Wilson / EyeEmImifanekiso kaGetty
2. YANDISA ISithuba
Yiba nomnyango ovulekileyo ngaphandle, okanye utyibilike okanye usonge ukwenza elona galelo lincinci kwigumbi. Khetha i-triangular-shaped okanye wall-hung corner toilet if you can (umzekelo, IBermuda Corner Cloakroom Suite, iVictorianPlumbing.co.uk ), ibhokisi emgodini ukuba kunokwenzeka kwaye ukhethe ikona encinci okanye isinki yoxande. Gcina iimpompo zingabonakali, kwaye uphephe iimodeli 'zempophoma' kwindawo encinci; iindwendwe ezingalumkanga zingabangela umkhukula. Ukugcinwa kwebhokisi ngaphakathi okanye iyunithi yento engento eludongeni kufuneka ifihle izinto eziyimfuneko.
UJacek KadajImifanekiso kaGetty
Izisombululo zokugcina ezilula zokuhlambela ze- $ 25 nangaphantsi
Ukubamba iitawuli ezi-4-5, zigcine zisondele kufutshane nolu donga lubumbeneyo lubambe umnini wetawuli.
Uluhlu lweTawuli loThotho loLondolozo lweTreyini, i- £ 12.90 yeAmazon
Ezi bhaskithi zale mihla, ziisetyhula sisisombululo esifanelekileyo sokugcina.
Ingqokelela Yasekhaya-Iseti yeebhotile ezimbini zokugcina i-monochrome 'Hygge', £ 16, Iifayile
Eyilwe ukuba ithathe indawo encinci kwisitya sokuhlambela, le ndawo ikhethekileyo yokuhlamba i-caddy inyuka ngaphezulu kwentloko yeshawa okanye ngaphaya komnyango.
Umbra Flex 2 Umgangatho wokuxhoma ibhasikithi yokuhlamba, i- £ 25, uJohn Lewis
Ukugqibelela ukugcina izinto ezincinci, le caddy yahlulwe yangamacandelo ahlukeneyo ukujongana nokugcina izinto ezahlukeneyo zokuzilungisa.
UJoseph Joseph Ogcina iVenkile yokuGcina ngokuLula, i- £ 18, iArgos
uhlaziya njani iikhabhathi zasekhitshini
3. GCINA ITID
Nangona kunjalo, indawo encinci enjalo iseyimagnethi yokuxinana. Tyala imali kwimizi yokuhambisa isepha yokuhambisa kunye nabanini bezinto zangasese, kunye neshelufu encinci yeencwadi ekuphakameni okufanelekileyo kwezinto zokufunda. Sebenzisa indawo kakuhle kwaye inokuphinda kabini njengegumbi lokuqalisa elincinci. Umyili wangaphakathi uCato Cooper, we I-Emporium Somerset , ucinga ukuba licebo elilungileyo ukulungisa izikhonkwane ezijikeleze iindonga ukuxhoma iidyasi, iminqwazi kunye nezikhafu. Ungalibali ngokugcinwa kwezihlangu, utshilo. 'Unokwenza ishelufu esenziwe ngemingxunya yokubeka isitayile ukugcina ngababini kunye kwaye ugcine ezinye izinto ezinje ngeengxowa zokuthenga kunye neeambrela.'
JD Williams Aria Igumbi lokuhlambela ileli yeshelfu
Igumbi lokuhlambela ileli yesherifu, £ 45, JD Williams THENGA NGOKU
4. YIBA NESIBOPHO NOKUHUMBISA
Amathuba okuba ucango lwakho lwangaphantsi loo nto iya kuhlala ivaliwe, ke yindawo efanelekileyo yokubonisa ubuntu bakho ngomthunzi wepeyinti owomeleleyo- onjengombala omfusa okanye lwemostade- okanye iphepha lodonga elinobunkunkqele, njengeentsimbi kunye nokuprintwa kweentyatyambo okumangalisayo. 'Ungaphambana ngokugqunywa eludongeni kunye nemibala, kodwa ukuze ube nemvisiswano, qhagamshela kumbala womgangatho,' ucebisa uPeter Keane, umlawuli Inkampani yeNdalo yoMgangatho weenkuni . Ukongeza ubunzulu kunye noburhabaxa, unokujonga ukugquma eludongeni okunje ngethayile epholileyo yokufihla iinkomo. Iqela elinezinto ezinjengeenkomo zokufihla umbhoxo kwaye loo nto yakho iya kuba yindawo yokuthetha. '
Inkampani yeNdalo yoMgangatho weenkuni
Ukuboniswa: Umgangatho weNtaba oMsi, Inkampani yeNdalo yoMgangatho weenkuni
5. BONISA UKUKHANYA
Dlala ngombono kwaye wazise isipili esikhulu okanye esihle. Beka oku kudonga lwangasemva, olunokubakho ngaphezulu kwendlu yangasese, kwaye unike umbono ongekhoyo. Okanye ukhethe ukubonisa ingqokelela yezipili ezincinci- mhlawumbi iidiliya okanye ulungelelwaniso lwezakhelo- zilungelelaniswe kufutshane kunye nefuthe eliphezulu. Kwakhona, cinga ukongeza i-niche ngasemva kwe-loo ongayikhanyisa ngokukhanyisa, utshilo uSally Storey, umlawuli woyilo lwe UJohn Cullen Ukukhanya , 'Oku kuyakuzisa ukukhanya okungathanga ngqo kwisithuba kwaye kongeze ubunzulu kwigumbi.'
Ukhethwe: Igumbi lokuhlambela eliyilwe ngu Uzalela uRené Ibonisa uCole & Son's Woods & Pears lodonga, nge- $ 85 kwi UJohn Lewis , kunye neeCeramalano Ceramics ezivela kwiFamailoes.
iingcango zomnyango wangaphambili iingcinga
6. KHETHA IITHILI EZIPHAKAMILEYO
Iithayile gcina iindonga kunye neendawo ezikhanyayo, kodwa ungayi kwizinto ezicacileyo. Ndihlala ndicebisa abathengi ukuba bakhethe iithayile ezinkulu kunokuba bacinga kuqala kuba benza umbono ongekhoyo we-luxe kwindawo encinci, utshilo uChris Grainger, umphathi wecandelo ILitye kunye neNdawo yokugcina indlu . Abantu bahlala benza impazamo yokusebenzisa iithayile ezincinci okanye nezinto zobugcisa apha. Oku kunokuba luncedo ekwenzeni uyilo oluntsonkothileyo kunye neepateni, kodwa kukho imigca ye-grout engaphezulu kakhulu evezwe ngokuthelekiswa neethayile ezinkulu zefomathi. Oku, kudityaniswe nokusetyenziswa okunzima kwegumbi ekufumaneni kuthetha ukuba kuya kufuneka uyicoce rhoqo gcina i-grout ijongeka icocekile intsha. '
Ilitye kunye neNdawo yokugcina indlu
Kukhethwe: Uluhlu lweMagma Tile, olufumaneka ngemibala emibini: Ngwevu -ukuqala nge- $ 150.00 m2 kunye ne-White-ukuqala kwi- £ 190.00 m2, Ilitye kunye neNdawo yokugcina indlu .
7. YEKA UKUTHUTHUZWA
Akukho nto eyamkelekileyo kunendawo yokuhlambela ebandayo. Itreyini eshushu eshushu iluncedo (umzekelo, i IVogue Curvee White Towel Rail, Ivenkile yaseBritani yokuGcina ). Nangona kunjalo, apho indawo yodonga ithintelweyo, ukufudumeza ngaphantsi sisisombululo esifanelekileyo -kukubalekisa inkqubo yokufudumeza esembindini, okanye faka ukhuko lombane. Yabona Isikrini izimvo kunye namaxabiso. Ukuba akukho festile, ifeni yokungenisa umoya egcinwe kakuhle kufuneka. EnviroVent Ltd. Isithethi, u-Adam Slinger, unale ngcebiso iluncedo: 'Ukuba ifeni yesikhupheli ayinakho ukubamba ikhadi leposi ayiboneleli ngumoya waneleyo, kufanelekile ukuba ubuyisele iyunithi okanye ucoca isihluzo.'
UF Fabrice LEROUGEImifanekiso kaGetty
8. BONISA UBUTYEBI BESINTU
Iifoto, amakhadi emenyu, iikhathuni kunye neemememento eziyiliweyo ... Kumakhaya akumgangatho ophezulu, indawo esezantsi loo ndawo kudala iyindawo yokuxhoma izinto ezixabisekileyo ngendlela engacacanga. Umbono wokuba 'uyahlekisa', utshilo ingcali yamakhaya eediliya u-Alexandra Campbell. 'Umyili wezinto zangaphakathi wakha wandixelela ukuba abasetyhini bahlala bethumela ubomi bangaphambili babayeni babo kwindawo engezantsi loo nto, yiyo loo nto nifumana izatifikethi, amabhaso, iifoto zesikolo njalo njalo.' Ungayilungelelanisa le ngcamango yakudala ngokwenza imontage ye-snaps yosapho, okanye imbali ebonakalayo yekhaya lakho kwiifreyimu ezimnyama ezicacileyo.
UMartin BarraudImifanekiso kaGetty
Eyona ndlela ilungileyo yokusonga ijini
Ngaba iincukuthu ziyingozi
yenza umhombiso wekrisimesi
UChristina el moussa kunye netarek